မိုချိုမှ သဂျီး သို့ ပေးတဲ့ကတိ ၃ ခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » မိုချိုမှ သဂျီး သို့ ပေးတဲ့ကတိ ၃ ခု
Posted by မိုချို on Mar 25, 2012 in Letter to The Editor | 26 comments
ဂေဇတ်မှာ မိုချို ဓါတ်ပုံ အပါဝင် ပိုစ့် ၃ပုဒ် အောင် အောင်မြင်မြင် တင်ခဲ့ ပြီး ပါပြီ။ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မန်းဂေဇတ်ရဲ့ ရွာသူအသစ် မှ ရွာသူအစစ် ဖြစ်သွားပြီဟု မှတ်ယူလိုက်ပါပြီ။ ရွာသူ မိုချို မှ သဂျီးသို့ ကတိ ၃ ခု ပေးပါမည်။
ကတိ(၁) – မိုချို forward mail များနှင့် တခြား site များမှ ပိုစ့်များကို လင့်ခ် ပေး၍ ကော်ပီ ကူးတင်ခြင်း လုံးဝ လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အီး မေးကို တလနေလို့ တခါမဖွင့်ဖြစ်ခြင်း၊ facebook account ရှိသော်လည်း မည်သူတဦးတယောက် ကိုမှ မ add ဘူးခြင်း ၊ လက်မခံဘူးခြင်း ( ရှင်းရှင်းပြောရရင် facebook မသုံးဖြစ်) တို့ကြောင့် သတင်းဦး သတင်းထူးများကို သူများထက်ဦးစွာ ဘယ်တော့မှမသိပါ။ မိုချို ဖတ်ဖြစ်သော site တော်တော် များများကိုလည်းဂေဇတ်မှတဆင့် သာ သိခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် မိုချိုသိလျင် ရွာသူားထဲကလည်း သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မိုချို မတင်သော်လည်း အဲလိုတင်သော ရွာသူား များရဲ့ ပိုစ့်များကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဖတ် ရှု ပါသည်။ မရောက်ဖူး သေးတဲ့ လင့်ခ်ဖြစ်နေရင် သွားတောင် စပ်စု လိုက်ပါသေးသည်။ အစပ်စု ကောင်း လို့ ဖြိုး ဆိုတဲ့ တယောက် ပေးတဲ့ လင့်ခ် ကနေ မိုချိုတို့ ပတ်ဝန်ုကျင် က ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ အတွင်းရေးကို မျက်လုံးတွေ ပြူးသွားလောက်အောင် ပုံ တွေနဲ့တကွ သိခဲ့ရဖူးပါသည်။
ရွာသားတယောက်ရဲ့ ကြောက်တတ်ရင် မကြည့် ပါနဲ့ လို့သတိပေးပြီး တင်ထားတဲ့ လင့်ခ် ကို ဖွင့် လိုက်တာ ထိုင်းနိုင်ငံ နာရေး ကူညီမှု အသင်းက ဓါတ်ပုံတွေ တွေ့ပြီး Final destination ဇတ်လမ်းတွေတောင် မ ကြည့် ရဲလောက်အောင် အသည်းကောင်းတဲ့ မစပ်စု မိုချို တယောက် ကတုန်ကယင် ဂယောက်ဂယက် တွေ ဖြစ်သွားခဲ့ဖူးပါသည်။
စိတ်တို ဒေါသထွက်စရာ ပါ လို့ ရွာသား တယောက် မှတ်ချက်ပြုပြီး ပေးထား တဲ့ လင့်ခ် ကို ၀င်ကြည့်မိလို့ ဒေါသတွေ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ထွက်ဖူးပါတယ်။ လူကြီးအချို့ တောင် ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရေး လုပ်ဖို့ ကြိုး စားနေတဲ့အချိန်မှာ အမှန်ကို မမြင်နိုင်လောက်အောင် ဦးနှောက်ဆေး ခံထားရတဲ့ မရင့်ကျက်တဲ့ သူတစုရဲ့ site တခုပါ။ လူ့စိတ် ဆိုတာကလည်း ခက်သားလား။ ပျော်စရာ ၊ ကြည်နူးစရာ၊ အံ့သြ ၀မ်းသာစရာ တွေအပြင် ကို ကြီးမိုက်ရေးသလို ပဲ ရသ ၉ ပါးလုံး စုံအောင် ခံစားချင်တော့တခါတရံ စိတ်တိုစရာ ကိုပဲ သွားကြည့်မိပြန်ရော။
ပြော သာပြောနေတာ ရွာသားတွေထဲမှာကော၊ ဂေဇတ်ကို ၀င် ဖတ်တဲ့ သူထဲမှာရော အဲဒီကလူတွေ မပါဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော။ .. စီအိုင်ဒီ က သဂျီး ကတော့သိနေမှာပဲ။ မိုချိုပြောတာ ဘယ် site လဲ သိချင်ရင် ရွာသူားတွေ အချင်းချင်း လက်တို့ ..အဲ… ကီးဘုတ် တို့ပြီးသာ မေးကြပါကုန်။ …..အစတော့ ဖေါ်ပေးလိုက်မယ်။ အဲဒီ site ရဲ့ အတိုကောက် က (Eleven Media Group) ကို အတိုကောက်ရေးတဲ့ EMG နဲ့ စာလုံးတွေ အကုန်တူပြီး ရှေ့နောက် စီတာပဲ လွဲတယ်။
….. ရေးရင်းနဲ့ ဘေးချော် ကုန်ပြီ။ ……ကဲ…..ကဲ…ဆက်ပြီး ကတိပေးလိုက်ပါဦးမည်။
ကတိ(၂)- သဂျီး က တနေ့လျင် ပိုစ့်၂ခု ထိတင်ခွင့်ပြုသော်လည်း ဘယ်တော့မှ တနေ့တည်း ပိုစ့်၂ခု ပြည့်အောင် တင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုချို ပြောနေကြအတိုင်းပါပဲ၊ စာတလုံးချင်းပဲရိုက်တတ်တဲ့ မိုချို အတွက် ပိုစ့် တပုဒ်ပြီးဖို့ အနည်းဆုံး ၁ ရက် တိတိကြာ လို့ပါပဲ။
ကတိ(၃)- မိုချိုရဲ့ ပိုစ့်အပါအ၀င် ဘယ် ပိုစ့် မှာမဆို ရွာသူားတွေ ပေးထားတဲ့ ဘယ်လို ကွန်မန့် ကိုမဆို အနီရောင် ခြယ်ခြင်း လုံးဝလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပိုစ့်အပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ ကွန်မန့် ပေါ်မှာ ဖြစ်စေ သဘောတူခြင်း ၊မတူခြင်း စတဲ့ မိမိ အမြင်တို့ကို ကွန်မန့်အနေနှင့် ပြန်လည် တင်ပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောလိုပါက ပိုစ့်တခုအနေနှင့် သပ်သပ် ရေး၍ ( သြဇီက အဘ ဦးဖောလို) တင်နိုင် သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် မိုချိုရဲ့ဘယ် ကွန်မန့်ကိုမဆို ကြိုက်သလို နီနိုင် ၊ စိမ်းနိုင် ပါသည်။ နီခြင်း ၊ စိမ်းခြင်း တို့သည် မိုချိုရဲ့ ကွန်မန့် ကိုစိတ် ၀င်တစားဖတ်သူ ရှိကြောင်း ပြခြင်းဖြစ်၍ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံပါသည်။
ကတိပေးပြီးတော့ အသိပေး ခွင့် တောင်း ရအုံးမည် ။ သဂျီးရဲ့ ဆာဗာကို အားနာသော်လည်း မိုချို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထူးခြားသည်၊ လှပသည်ဟု ( မိုချို့စိတ်တွင် )ထင် သော အကြောင်းအရာ၊ အဖြစ် အပျက် ၊ ရှု ခင်း စသည်တို့ကို ဓါတ်ပုံ အဖြစ် တင်ပါမည်။ အလင်းအမှောင်၊ အယူအဆ ဘာဆိုဘာမှ မသိသော မိုချိုမှ ကင်မရာအဟောင်း ၊ ဖုန်း အစုတ် လေး များနှင့် ရိုက်ထားသော ပုံများသာဖြစ်ပါသည်။
ကတိ(၁) မှာ ပြောထားတဲ့အကြောင်းပြချက် တွေဖတ်ပြီး ရွာသူား တွေ က မိုချို့ကို ဆက်ဆံရေး ကျဲတဲ့သူ၊ အပေါင်းသင်း မခင်တဲ့ သူလို့တော့မထင်ပါနှင့် ။ မိုချို လူချင်း အပြင်မှာ တွေ့ရင် အလွန်ခင်တတ် ပါသည်။ ပါးစပ်က စကား များသလောက် လက် က မလိုက်နိုင်သော ကြောင့်online ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေ မထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခုတော့ ဂေဇတ် ရွာသူဖြစ်ပြီ ဆိုတော့ ရွာသူား အားလုံးနဲ့ အိမ်နီးနားချင်း တွေ ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဥပမာ ပေးမိသည့် အတွက် အဘဖောမှ ခွင့်ပြု မည်ဟုထင်ပါသည်။
“မိုချိုရဲ့ ပိုစ့်အပါအ၀င် ဘယ် ပိုစ့် မှာမဆို ရွာသူားတွေ ပေးထားတဲ့ ဘယ်လို ကွန်မန့် ကိုမဆို အနီရောင် ခြယ်ခြင်း လုံးဝလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့် မိုချိုရဲ့ဘယ် ကွန်မန့်ကိုမဆို ကြိုက်သလို နီနိုင် ၊ စိမ်းနိုင် ပါသည်။ နီခြင်း ၊ စိမ်းခြင်း တို့သည် မိုချိုရဲ့ ကွန်မန့် ကိုစိတ် ၀င်တစားဖတ်သူ ရှိကြောင်း ပြခြင်းဖြစ်၍ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံပါသည်။”
ကျွန်တော်လည်းအစကတော့ကိုယ်မကြိုက်ရင်နီလိုက်တယ် ကြိုက်ရင်စိမ်းလိုက်တယ် အခုတော့အဲဒါက
ကော်ပီကိုအပြည့်ကူးတဲ့အနေနဲ့ ရေးထားတာတွေကိုကူးတင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖတ်စေချင်ရင် လင့်ခ်သာ
ပေးခိုင်းလိုက်လို့မရဘူးလားဗျ ရွာသားတွေကို လင့်ခ်ပေးပြီးဖတ်လို့မရမှသာ အပြည့်အစုံကိုမည့်သည့်လင့်ခ်
မှကူးယူဖော်ပြသည်ဆိုတဲ့ ပို့စ်မျိုးပြန်တင်ခိုင်းပေါ့။ ဒါလည်းအန်တီမိုချိုပို့စ်မှ ရှမ်းပြည်သားပေးတဲ့
အကြံပေးကွန်မန်း မကြိုက်တဲ့သူနီချင်နီ ကြိုက်တဲ့သူစိမ်းချင်စိမ်း don`t care ပဲ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်
ဖော်ခွင့်ရှိတယ် ။ အန်တီချိုရေ……………လက်မထောင်သွားလို့အားမရတာနဲ့ ကွန်မန်းပါပေးလိုက်တယ်
ကော်ပီကူးတင်တာကမြန်မြန်ဖတ်ရတာပေါ့။ လင့်ခ်ပဲပေးပြီးရင် တခါအဲဒီ လင့်ခ်ကိုပြန်ဖွင့်နေရ တာကမလွယ်လောက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာကိုးနတ်ရှင်က အခုမျက်နှာသာပေးပေမဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလိုမရှိတော့ပြန်ဘူး။ အဲတော့ သေချာတာကတော့ ဖွင့်လို့ရတဲ့သူက ( သတင်းထူး ဆိုရင်) တခါထဲကူးတင်တာကို တော့ထောက်ခံချင်ပါတယ်။ နို့မို့အဲဒီလင့်ခ်တွေဖွင့်နေရတာနဲ့ပဲအ ချိန်ကုန်ကုန်သွားပေါင်းများလို့ပါ။
ထောက်ခံတယ် ဆိုိလို့ ကျေးဇူးပါ။အန်တီကတော့သူများတွေ ကော်ပီအပြည့် ကူးတင် တာလည်း ထောက်ခံပါတယ်။ အများကြီး လိုက် ကြည့်စရာမလို ပဲနဲ့ ဂေဇတ် တခုတည်းကတင် သတင်းစုံ ၊အကြောင်းစုံ သိရတော့ပိုကာင်းတာပေါ့။ ကိုယ်ကတော့ မရှာပေးနိုင်တဲ့အကြောင်း ပဲပြောတာပါ။
ရွာထဲရောက်လာလို့ကတော့ မနက်ကေ၇ာက်ရောက်အခုရောက်ရောက် ရွာသူအခွင့်အရေးအပြည့်ပေးမှာပါနော်။
ရော့ ယူလိုက် ယူပါနော်………….ရော့ ယူလိုက်………………..(ဇော်ဝင်းထွဋ်လေသံဖြင့်)ဆိုသည်။
ဘာတွေ ရက်ရက်ရောရော ပေးနေတာလဲဗျ
ကိုယ့် ကို ကော မိချို လေး ကတိ ဘယ်နှစ်ခု ပေးမှာရဲဟင် ????? ဟီဟိ
မိချိုကတော့ သိဝူး ..
သူ့လူဂျီးကတော့ လက်သီး သုံးလုံးလောက် ပေးချင်လို့တဲ့ ..
ကပေ ငဲကြီးလိမ့်မယ် ….
ဟုတ်ကဲ့ ပါ…. မမုန့်ချို အဲ မမိုချိုရေ….. ကျွန်တော်လည်း သူများရေးတဲ့ စာဘယ်တော့မှ ယူမတင်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်….။ ထူးခြားလို့ သိစေချင်ရင်တော့ ကော်မန့် ကနေ လင့်နဲ့ ပေးပါ့မယ်….။ မနေ့ကတောင် ပို့စ်တစ်ခုမှာ လင့်နဲ့ ပေးလိုက်တာ အဲဒိအကြောင်းအရာကိုပဲ ပို့တစ်ခုအနေနဲ့ တက်လာတာတွေ့လိုက်သေးရဲ့………….။ အနီကတော့ ဘယ်သူ့မှမပေးပါဘူးနော်…။ သူများနီသွားတာတွေသာ လိုက်စိမ်းပေးရတာ……။ ကျွန်တော်လည်း ခုတစ်လော စာရိုက်ရတာပျင်းပြီး ပို့နှစ်ခုမတက်တာကြာပါပြီ….။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကြီးကတော့ သိမှာပါလေ………. နော် သူကြီး နော် နော်
ကျွန်မလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မနီခဲ့ပါဘူး။မမန့်နိုင်တဲ့အခါ စိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
(ခြသေ့င်္ကျွန်းကိုများရောက်ရင် မိုချို့လက်ရာစားရမလားလို့ ဖားကြည့်ထားတာ):D
ရွာသူရွာသားတွေ ရဲ့ အပြင်မှာပါ ရင်းရင်းနှီး နှီး ခင်မင်နေ ကြတာကို အားကျ လို့ရယ်၊ စာတွေ ဖတ်ရင်း ကနေ ရေးချင် စိတ် ကို ထိန်း မရတော့တာရယ်ကြောင့် စာဖတ်သူအဖြစ်အကြာကြီး နေနေရာကနေ စာရေးတဲ့ ရွာသူအဖြစ် ခံယူ လိုက်တာပါ။ ရွာသူရွာသားတွေကို စလုံးမှာ ဖြစ် ဖြစ် ၊ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ် ဖြစ်
တွေ့ရင် မုန့်လိုက်စား ..အဲ .. . မုန့်လိုက်ကြွေးပါ့မယ်၊ အန်တီပဒုမ္မာရေ။
ပထမ ကတိကိုတော့ ဦးမာဃ ချိုးဖောက်ပြီးပြီဗျ
ဒုတိယ ကတိကတော့ ချိုးဖောက်လုနီးနီးပဲ
တတိယ ကတိကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ
အင်းးး မိုချိုပေးတဲ့ ကတိမျိုး ကိုယ်တောင် မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
ကြိုဆိုပါတယ် မိုချိုရဲ့ ကတိနဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေကို။
ရွာသူအစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ပန်းပွားကလေး လေ့ကျင့်ထား။
(ရွာသူတွေရဲ့ ပန်းပွားအက ကိုတောင်းဆိုနေကြတာတွေရှိလို့) :mrgree:
တို့များ လဲ ပန်းပွါးအက ဆိုတာ မသိပါလား။
လင်း ပေးပါဦး။ :-)
Dear Aunty Khin Latt,
Really? You really did not know it????
There will beavictory ceremony at Pan Ta Naw Donation( May 1 ,2012 ).
So… They are preparing for it.OK?
မိုချို ရေ အရေးလေး နဲ့ အတွေးလေး က အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူလို့ မပြောရဘူး။
ကတိ က ၃ ခု တောင်မှလို့ ပြောရမလား။ ၃ခု ဘဲလားလို့ ပြောရမလား။
အသစ်အဆန်း လေးတွေ ဖတ်ဖို့ မျှော်နေမယ်။
လေးစား အားကျဖွယ် ပါ
ဂတိ ၃ ခုနဲ့ ရှင်သန်ထမြောက်နိုင်ပါစေ
4. ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိ
အပေါ်က..စည်းကမ်းတွေ… အထူးပြုပြီး.. ကိုယ်တိုင်နဲ့နှိုင်း.. တာဝန်ခံတယ်ပေါ့..
ဒါလည်း… ကျေးကျေးပါ..။ မှန်ပါတယ်.. နီဖို့စိမ်းဖို့.. ၄-၄စက္ကန့်လောက်ကတော့… အချိန်ယူရမှာပါ…။
စကားပြောတဲ့.. ပုံတွေစိတ်သဘောရှိသလို တင်နိုင်ပါကြောင်း…
ရေးမဲ့ရေးတော့လည်း – “ရှယ်” ပါဘဲ။
လူတစ်ဦးရဲ့ အဇစ္ဈတ္တ​သဏ္ဍာန်ကိုပေါ်အောင်ရေးနိုင်ခြင်း ဟာ ကလောင်သွားရဲ့ထက်မြက်တဲ့လက်နက် အင်အားတခုပါဘဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပညတ်ဘို့သိပ်မလိုပါဘူး။
(စကားမစပ် – ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ ဆရာတင်မိုး နဲ့များပါတ်သက်နေမလား?)
အရေးအသားကောင်းသူရဲ့ စာကောင်းများကို ဖတ်ဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲရေးထားတဲ့သူရဲ့စာကို ကျနော်ကလဲခက်ခက်ခဲခဲ ဖတ်နေရပါတယ်၊ (ကွန်မကောင်းလို့ စာတပုဒ်ဖတ်ရဖို့အရေး တစ်ခါတစ်လေ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်စောင့်ရတယ်)
မိုချိုရဲ့ ပို့စ်မှာ ကွန်မန့် ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမက (စာစီစာကုံးကလွဲလို့)ဒီ ဂေဇတ်မှာမှ စပြီး စာရေးဖူးတာပါ။ စာဖတ်တာကတော့ သူငယ်တန်းအောင်လို့ စာစဖတ်တတ် ကတည်းက အကြီးမားဆုံးဝါသနာပါ။စာရေးဆရာစုံ၊ စာအစုံ ကိုဖတ်တာပါ။ ဆရာ မောင်မိုးညို ရဲ့ စာတွေ လည်း ဖတ်ဖူးသလို၊ ဆရာထက်ဝေး ကိုလည်း ဂေဇတ်ထဲ မရောက် ဖူးခင်တည်းကသိတယ်။ ကျမငယ်ငယ် တုန်းကဖတ်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေ ထဲမှာ သဂျီးရဲ့ လေဒီ ဆရာမ ညို ခက် ကျော် ရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး တွေ ဖတ်ဖူးတယ်၊ အဲတုန်းက ခက်မာ၊ ညိုခက်ကျော် စတဲ့နာမည် တွေကို အတွေးဆန်းဆန်း ၀တ္ထုတို လေးတွေနဲ့တွဲပြီး မှတ် မိနေတယ်။ ကျမကစာဖတ်တာများတော့ စာရေးဆရာ အစုံစုံ ရဲ့ ရေးဟန် အဖုံ ဖုံ ကျမစိတ်ထဲ စွဲနေပါတယ်။အဲတာကြောင့် ကျမရေးတဲ့စာတွေမှာ တကယ့်စာရေးဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ရေးဟန်တွေပါနေရင် ကျမရဲ့အားနည်း၊ ချွတ်ယွင်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုချို့ကို ဦးကြောင်ကြီး ခြစ်ပါ့မယ်လို့ ရပ်သိရွာသိ ဂတိပေးပါတယ်..။ ဒါနဲ့ စကားစပ်လို့ သဂျီးနဲ့ဒေါ်ညိုခက်ကျော်ဆိုတာ ဦးကြောင် မိဘလို လေးစားချစ်ခင်မြတ်နိုး ယုံကြည်အားကိုး ရသူများပေါ့ကွယ်။ ကြုံဒုံး ဒီနေရာကနေ ပါပါနဲ့ မာမာကို ဂဒေါ့လိုက်ပါဒယ်။။
အမမိုချိုေ၇.. ကတိစကားစကားတွေကို ဖတ်ပြီး ပီတိပွားရပါတယ်…
နံပါတ် ၁ ကတော့ ဘယ်လိုဘယ်ဝါ ပြောမတတ်ပေမဲ့
၂ ကတော့ ကျနော်လည်းအဲ့လို ဖြစ်နေတတ်ပြီး ..၃ ကတော့ နှစ်သက်လွန်းလို့ ကိုသေချာမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်…
လက်ရာ ပုံကောင်းလေးတွေကို မျှော်ရင်း..အိမ်နီးချင်းအမကို ဒီကွန်းမန့် နဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် နော်…
အားပေးပါတယ် မမိုချို ရေ… အရေးအသားကတော့ ထိမိပါတယ်…
များများရေးပါရှင့်။ တစ်နေ့ကို နှစ်ပုဒ်ကြီးများတောင် တင်ခွင့်ရှိတာပဲ။ မနောတော့ ခုတစ်လော မအားတာရယ်၊ အပျင်းထူတာရယ်ကြောင့် ဘာစာမှမရေးမတင်ဖြစ်ဘူး။ ၃ ရက်လောက်နေမှ ရွာထဲပိုစ့်တင်ဖြစ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ စာမရိုက်ချင်တာလည်းပါတယ်။ များများရိုက်ရင်း လက်သွက်လာမှာပါ မမမိုချိုရေ… အားပေးတယ် ဆက်ရေး… အားပေးနေမယ်နော်…